RBSiC chidhinha - China ZhongPeng Special Ceramics
Zvaakazoita waakaita nesilicon Carbide kuti zvisiri Wear Parts uye Thrust mabheyaringi The Zvaakazoita waakaita nesilicon Carbide inobvumira zvakawanda acids uye alkalis. Uye yakanaka chokupika simba mukuru, mukuru zvakaoma, mukuru vapfeke nemishonga, mukuru tembiricha nemishonga, ngura kuramba. The akasiyana siyana maumbirwo anokosha zvikamu zviri yakanakira migodhi, petrochemical, metallurgia kugadzira, Aerospace uye zvenyukireya maindasitiri, yakadaro imwe nharaunda. Tinogona kuita chero saizi ...
Zvaakazoita waakaita nesilicon Carbide for Irregular Wear Parts and Thrust Bearings
The Zvaakazoita waakaita nesilicon Carbide inobvumira zvakawanda acids uye alkalis. Uye yakanaka chokupika simba mukuru, mukuru zvakaoma, mukuru vapfeke nemishonga, mukuru tembiricha nemishonga, ngura kuramba. The akasiyana siyana maumbirwo anokosha zvikamu zviri yakanakira migodhi, petrochemical, metallurgia kugadzira, Aerospace uye zvenyukireya maindasitiri, yakadaro imwe nharaunda. Tinogona kuita chero hukuru inopiwa maererano mutengi chikumbiro.
Previous: RBSiC (SiSiC) conical ruoko
Next: Zvaakazoita waakaita nesilicon carbide firita separator
ZPC dzino SiC separator
Edge aidzivirira nokuda Separator
Zvaakazoita waakaita nesilicon carbide separator